Keeniyaan Dhuma Torban Kanaa Ummata Ishee Lakkoofti
Keeniyaan ganna 10 dura, bara 2009 lakkoofsa uummata geggeesite (sooraa faayilii)
Keeniyaan dhuma torbee kana duula lakkoofsa ummata ishee lakkaawuu raawwatti. Biiroon Lakkoofsa Ummata Keeniyaa sirna kana raawwachuuf qophii gahaan taasifameera jedhee jira. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Ganna 10’tti kan gaggeeffamu lakkoofsi ummata keeniyaa boruu fi dilbata gaggeeffama. Lakkoofsa ummataa kana hordoffiin ka raawwachiisu Biiroon lakkoofsa ummataa ka mootummaa keeniyaa, hojii kanaaf meeshaa gahaa fi humni namaa barbaachisuu qopheessuu beeksiseera. Waajjirooleen Ministeeraa sadii ka dhimmi lakkoofsi ummataa kun isaan ilaallatu kaleessa ibsa kennanii jiru. Minsitirri Dhimma Keessoo Keeniyaa Freed Maatyaang’ii yoo lakkoofsi ummataa gaggeeffamu manneetiin farsoo fi dhugaatii kaan gurguran akka cufaman ajajaniiru.
Maatyaang’iin dabalanii namootni lakkoofsaaf gara mana keessanii dhufan poolisii waliin ka dhufan darbees eenyummeessaa kan harkaa qaban tahuu adda baafadhaa jechuunis lammilee Keeniyaaf dhaamanii jiru. Ministirri maallaqaa Keeniyaa haarawa muudaman Ukur yaataaniinis mootummaan bajata gahaa akka qopheesse dubbatan. Kanaanis biyyattiin walumaa galatti doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 60 ol baasii taasisuu ifoomsan. Mr. yaataan baasiin humna namaaf kaffalamu bakka ol’aanaa akka qabu himanii dulli lakkoofsa ummataa kun nama kuma 200 f carraa hojii uumuu dubbatan.
Lakkoofsa Ummata Keeniyaa meeshaalee barbaachisoo dhiheessuu fi odeeffannoo argamu ka kuusuu f tamsaasu ministeera Information fi Koomunikeeshinii biyyattiiti. Ministirri Information fi Koomunikeeshinii Keeniyaa jooseef Mucheeruu meeshaan lakkoofsa ummataaf oolu sirriitti qophaayeera jedhan.
Lakkoofsa ummataa kanaaf taableetonni hojiirra oolan alaa bitamanii biyyatti kan qindeeffamaniidha. Softweerii ykn suurri keessoo isaan gargaaramanis ka biyyanatti nuun qophaayedha; kanaaf odeeffannoon martuu to’annoo keenya jela jira jechuudha.Mr. Mucheeruun lammileen Keeniyaa odeeffannoon kennan iccitiinsaa eegamaa waan taheef sodaan isaan seenuu hin qabuu jedhan.
Bu’aan lakkoofsa ummataa ka marsaa duraa ji’a sadiitti ifa kan taasifamu yoo tahu, ka walii galaa garuu ji’a jaha booda baha jedha mootummaan biyyattii.